Wararka - Taariikhda iyo Hormarinta Qalabiyaha Heerkulka Qalalan Taariikhda iyo Horumarinta Calibratorka Heerkulka Qalalan |
Taariikhda iyo Hormarinta Qalabiyaha Heerkulka Qalalan
Foornada jirka ee qallalan, sidoo kale loo yaqaan Foornada Qallalan, waa aalad la qaadan karo oo qalajisa Heerkulka Qalalan Calibrator-ka qalalan waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa berrinka ama cabbiraadda dareeraha heerkulka shaybaarka. Marka la barbardhigo qalabka cabbirka heerkulka ee nooca qubayska dareeraha dhaqameed, Qalabka Qalalaasaha Qalalan ee Qalalan wuxuu u adeegsadaa jirka qalalan kuleylka ama qaboojinta, taas oo si weyn u wanaajinaysa xawaaraha qaadista iyo qaboojinta, waxayna aad u yaraynaysaa mugga qalabka, kaasoo buuxin kara baahiyaha la qaadan karo. ku jira arjiga berrinka.
Qalabkii ugu horreeyay ee Dunida Qalajiya ee Qallalan ee Qalalan wuxuu ku dhashay Danmark, oo loo adeegsaday markabka markii la dhoofinayo si loo hubiyo nabadgelyada dhammaan nidaamyada loona buuxiyo shuruudaha saxda ah ee hagaajinta calaamadaha heerkulka. Maaddaama ay tahay waddan horumaray oo leh warshadaha maraakiibta dhaqameedka, Danmark waxay hormuud ka ahayd aagga tikniyoolajiyadda dhisidda maraakiibta ilaa xilligii Viking. Maanta, warshadaha Danmark ee maraakiibta iyo dhisida maraakiibta waxay wali ciyaarayaan liiska adduunka oo dhan. Markab si madaxbanaan ugu socdaala badda dhexdeeda wuxuu la mid yahay warshad yar, oo leh matoor u gaar ah, halbeegga korantada, nidaamka taageerada nolosha, nidaamka daaweynta biyaha, nidaamka qashinka loo tuuro iyo wixii la mid ah. Si loo hubiyo howlaha caadiga ah ee nidaamyadan, aad ayey muhiim u tahay in lagu cabbiro tilmaamayaasha nidaamyada ku habboon si joogto ah.
Qalabka kala-soocidda caadiga ah waxay u eg yihiin kuwo culus oo culus, oo aan ku habbooneyn in markabka lagu raro. Iyadoo lagu saleynayo xaaladda kor ku xusan, 1984, Danish Johanna Schiessl iyo seygeeda Frank Schiessl waxay si wada jir ah u ikhtiraaceen foornadii ugu horreysay ee qallalan ee jirka lagu qaadi karo, waxayna si wadajir ah u aasaaseen aaladda JOFRA. inay soo saaraan foornadii ugu horreysay ee qallalan ee magacyadooda ku hoos jirta.
Mabda'a aasaasiga ah ee foornada qalalan (nooca qalalan calibrator) waa mid fudud. Waxay kululeysaa ama qaboojineysaa bir bir ah heerkulka la dejiyay waxayna haysaa heerkulka lebiska iyo xasilloonida. Birta kululeeyaha heerkulbeegga birta ah waxay u adeegtaa mid dhexdhexaad ah si ay u bixiso goob la isku habeyn karo, labis iyo xasiloonida heerkulka tixraaca cabbirka si loo qiyaaso dareeraha heerkulka cabbira.